Talooyin loogu talagalay Berlin - Jarmalka - Meelaha 10 - 1aviagem.com
Talooyin ku saabsan Berlin - Jarmalka - 10 muuqaal
Qormadii hore: Sida dharka birta birta looga helo
Qormada xigta: Volcano iyo mucjiso safarka ugu horeeya ee Chile
Dhejiyay 7 March 2019 by Rômulo Lucena
Maxay tahay inaan ka filanno Berlin, caasimadda Germany? Tilmaamahan waxaa loogu talagalay qof kasta oo safarkooda ugu horeeya ku jira.
Haddii ay jiraan hal shay oo Berlin leedahay waa meel taariikheed oo uu ku soo booqdo. Inta badan waxay leedahay qiime taariikheed, derbi, oo ah caalam caan ah, Wall Wall; sunagoogyada, saldhigyada tareenka, marawaxadaha, beeraha, gawaarida, irdaha iyo xitaa nalalka gaadiidka! Marka la soo koobo, magaaladu waxay ka dhigtaa taariikhda, tan iyo markii uu ahaa masiibo dhacday dhacdooyinkii dagaalladii kowaad iyo labaad ee dunida. Xaqiiqo ayaa loo sheegaa, Berlin waxay u timid inay beddesho taariikhda bani-aadamka ee dunida oo dhan, waxayna mas'uul ka tahay isbeddel bulshadeed, dhaqameed iyo mid dhaqaale, illaa aan helno ilbaxnimo sida aan ognahay maanta.
Haddaba halkaas fadhiiso, waxaanna haynaa talooyin ku saabsan booqashada safarka ugu horeeya ee Berlin.
Anigu waxaan isku dayi doonaa inaanu koobanahay oo ka dhigo liiska 10 ee ugu sarreeya ee booqda magaalada.
1 - Darbiga Berlin
Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay sheyga ugu weyn, kaas oo waajib ah qof walba oo booqanaya Berlin.
Maxay tahay sababta? Dhamaan macnaha iyo taariikhda uu keeno isaga. Derbigu wuxuu ahaa matalaadkii ugu dambeeyay ee qaybta adduunka ee u dhexeeya caasimadda iyo bulshada. Sheekadiisa waxa ay muujineysaa sida bini-aadanku u samayn karo waalan, waxyaabo aan caadi ahayn oo aan qiyaaseynin cawaaqibka. Iyo sidoo kale sababta dadku u baahan yihiin in ay si dhow ula socdaan tallaabada hoggaamiyeyaashu ayna ahayn kuwo si aan caadi ahayn u raacaan amarada la bixiyey.
dayrta ee Wall Berlin ee 1989 muujinaysaa xirida ka mid ah magaalada ka mid ah Germany, kulan ka mid ah qaraabada iyo sida looga guulaystay muddo mugdi ah, ku noolaa dunida oo dhan. Waxaan isku dayayaa in ay la mid noqoto dhammaadka Apartheid ee Koonfur Afrika.
Dhismaha qashinka Berlin Wall ee waxaan ku dhashay nolosha. Rajada mustaqbalka.
2 - Calaamadeeye Charlie
Waxay ahayd askari ciidan oo ilaalinaya xudduudaha ka dhaxeeya Galbeedka iyo Bariga Berbera xilligii derbiga hareeyay, magaalada ayaana loo qaybiyey. Wareegga dhinac ka mid ah dhinaca kale ee CITY. Oo anigoo ku hadlaya magaalada sababtoo ah ma kala hadlin xudduudaha xuduudaha u dhexeeya wadamada, laakiin magaalada dhexdeeda lafteeda oo isku mid ah. Tani waa mid aad u walaacsan. Bal qiyaas in aad soo kacdid hal maalin oo aadan awoodin inaad soo booqatid qoyskaaga, ama asxaabtaada, maxaa yeelay waxay ku yaalaan dhinaca kale ee magaalada?
Waa hagaag, xeer kasta wuxuu leeyahay ka reebitaankiisa iyo kiiskani ma jirin wax ka duwan. Xagga jeegga ee Charlie waxaad ka gudbi kartaa dhinac ka mid ah Berlin oo kale. Laakiin, waa inaad noqotaa xubin ka mid ah Ciidamada Isbaheysiga ama diblomaasiga ajnabiga ah. Iyo sida iska cad isgaadhsiinta.
Maalmahan, waa mid ka mid ah goobaha ay ku badan yihiin dadka dalxiisayaasha ah. Qof kastaa wuxuu doonayaa inuu sawir ka qaado sawirka guriga iyo calaamad caan ah oo leh "Waxaad ka tagaysaa qaybta Mareykanka"! Waxaad ka tagaysaa qaybta Mareykanka.
3 - Alexanderplatz iyo Tower Tower
Waa sawir weyn oo mashquul ah oo Berlin ah. Waxaa ku yaal mid ka mid ah saldhigyada tareenka ee magaalada. Sidoo kale ku dhaaf khadad dhowr ah, marka laga reebo inaad tahay meel aad ku iibsan karto.
A Muuqaalka TV-ga (Fernsehturm) oo ku yaala jadwalkani waa mid weyn, wuxuu leeyahay mitir 368 waana dhismaha ugu weyn ee Berlin. Waa munaarad warbaahineed. Intaa waxaa dheer in ay leedahay makhaayad madax-banaan oo leh aragtida 360 ee magaalada. Sidoo kale waa soo laabasho, markaa waad arki kartaa magaalada iyada oo aan xitaa kor u qaadin kursiga! (Dhamaan jilibka oo dhan ayaa ku saabsan daqiiqado 30).
Muuqaalka TV ee Alexanderplatz
Muxuu yahay taariikha taariikhiga ah?
munaaraddii TV waa in uu ahaadaa dhisme u taagnayd oo dhan iyo ka dhigan tahay guushii ee hantiwadaagga badan shuuciyad. Fikradda waa in gudbikaraa munaaraddii TV waxay soo xusuusan satellite ah Soviet Sputnik (satellite ugu horeeyay ee si guul leh u diray space) iyo waa in ay leeyihiin midabka cas, midabka ah ee hantiwadaagga. Si kastaba ha ahaatee naqshadeeyaha ugu Bruno Flierl tilmaamay in midabka macdan muujinaysaa la mid ah oo dheeraad ah la satellite Sputnik ah, oo wakiil ka sarreeyaan farsamada oo ka mid ah dalalka hantiwadaagga.
Dhismaha waxaa iska lahaa Hermann Henselmann iyo Jörg Streitparth, oo ay ku darsadeen naqshadayaal kale sida Fritz Dieter, Günter Franke, Werner Ahrendt Walter Herzog iyo Heinz Aust.
4 - Guryaha Brandenburg
Dusha sare ee Brandenburg Gate
Guryaha Brandenburg Gate wuxuu ahaa mid ka mid ah albaabadii u soo geliyey Berlin markii magaaladu wali yar tahay oo ku hareereysan derbi, nooc ka mid ah qalcadda. Maanta waxaa laga yaabaa inay tahay waraaqda ugu caansan Berlin. Gawaarida Brandenburg waxay ku yaalaan Pariser Platz ee bartamaha bartamaha.
5-Park Park ama Tiergarten
Tani waxay noqonaysaa mid u dhiganta "Central Park" oo ku taal New York ama "Parque da Cidade oo ku taal Brasília". Booqasho u qalantaa kuwa doonaya inay nastaan ​​oo ay neefsadaan hawo nadiif ah iyadoo ay ku jiraan dhismayaal taariikhi ah oo aad u fara badan oo ku yaal magaalada Berlin.
6- Saldhiga cirfiidka - “Saldhiga cirfiidka”
Dad tiro yar ayaa ogaanaya, laakiin waxaa jira saldhig tareen oo ku yaal Berlin. Ma jiraan gawaarida tareenada, ma jiro wax la dhigo ama aan la demin. Oo maya, iyadu ma rabto. (Ama ugu yaraan ma aha inaan ogaado). Laakiin maaha in laga baxsado xukunka waa taariikh.
Waa saldhigga tareenka ee lagu ilaaliyo tan iyo dagaalkii labaad ee dunida iyo tan iyo dhismaha Berlin Wall. Iyada oo loo marayo tunnel subway dadka waxay ka gudbeen Bariga Berlin ilaa Galbeedka Berlin. Fikraddu waxay ahayd mid sahlan, maaddaama aysan suurtagal ahayn in la maro, sababtoo ah waxaa jiray derbi ilaaliya oo u qaybinayey magaalada. Kadibna waxaan hoos ugu soconaa, ka faa'iideysiga tunnelka.
Oo maxaa dhacay?
Dawladdu waxay ogaatay in dadku sameeyeen isgoysyadan (oo ku xadgudbay sharciga waqtigaas) waxayna go'aansadeen inay xakameeyaan marinka. Dhibaatadu waxay tahay inay joojiyaan labadaba labadaba marna ma doonayn inay ogaadaan cidda hoos u dhacday. Baahida aan loo baahnayn, dhowr qof ayaa halkaas ku geeriyootay iyagoo isku dayaya in ay dhinaca kale u gudbaan. Taasina waa sababta loogu yeero saldhigga gawaarida. Sababtoo ah dadkii halkaas ku aasnaa. Oo waxaa loo ilaaliyey taariikhda murugada ee qaybta Berlin, waxay u dhigantaa taariikhi hoose. Inkasta oo dib u soo celinta ay la socoto naqshadda 1960, waxaa suurtogal ah in la arko telefoonnada iyo tareenada wakhtiga ay ahaayeen markii ay go'doomiyeen. Sidaas darteed tareenada tareenada ma dhaafaan.
7- Hitler Bunker ama Führerbunker
Goob kale oo qiimaheeda ah ayaa ogaanaya inuu yahay Führerbunker.
Waxay ahayd goobtii ay Hitler isugu soo uruurisay shirkii xukuumaddiisa oo ay qorsheeyeen istaraatijiyaddiisa dagaalka.
Baqshaddani waxay ahayd mitir 5 oo ka qoto dheer dhulka oo waxay lahaayeen mitir dheeri oo dheeri ah si loo soo ururiyo. Fikradda waa in laga ilaaliyo weerarka hawada. (Waxaan ka hadlaynaa dhacdadii dagaalka labaad ee xusuusta?).
Waa meesha Hitler ee jidhkiisa laga helay. Waxaa la sheegay in uu weydiistay askartiisa in ay dilaan, maxaa yeelay, waxay arkeen in xukuumaddiisu ay soo afjari doonto sababtoo ah duullaankii iyo goobtii ay soo galeen ciidamada Alliance, wuxuu ogaa in la dilayo. Dabadeedna maskaxdiisu waxay noqoneysaa mid aad u anfacaya in lagu dilo Nazi oo ka badan dilka cadawga gacantiisa. Maaddaama qofna uusan lahayn geesinimadan, wuxuu ku dhameestay inuu is-dilo si uusan u bixin doonin ciidan soo duulay.
Marka la eego ahmiyada taariikhiga ah ee meeshani leedahay iyo culayska uu keenayo, jarmalka cusubi wuxuu go’aansaday inay fiicnaan lahayd in la dumiyo bakhaarka oo laga dhiso afar gees. Tani waxay ahayd waddo keenaysa macno cusub iyo dib u soo celinta bulshada. Bunker ayaa sidoo kale laga arki karaa filimka "Dhicitaankii, saacadihii ugu dambeeyay ee Hitler"
Goobta Hitler bunker
8 - Baarlamaanka Jarmalka ama Reichstag
Guryaha Reichstag (ma aha wax la mid ah!) LOL 😂😂) waxay u qalantaa booqashadii hore ee taariikhda Hitler ee dareenka iyo naxdinta. Waxaa jiray dab ka kacay kubbadda, oo laga yaabo inay sabab u tahay kacdoonada xagjirka ah, oo la xiray waqtigaas. Adolf Hitler, oo ahaa jagada Jarmalka wakhtigaa, ayaa ka faa'iideystay xaalada waxaana lagula taliyay madaxweynaha (oo si fudud loo aqbalay) inuu sameeyo go'aanka Reichstag. Wareegtani waxa ay ka saartay badi xuquuqda aadanaha. Iyo bilowgii Nazi hadal. Waxay ka socotay halkaas in kale oo kale ayaa la siiyay, sida dhismaha Berlin Wall. Ha ilaawin inaad soo booqato qoorta.
9- Xusuusta Holocaust
Xusuusinkan, oo la dhisay 2.711 qaybo dabiici ah oo heer sare ah iyo dabaq aan isku mid ahayn waxay doonayaan inay soo booqdaan dareenka dhibta, cabsida iyo socodka adag. Waa kuwee wixii ku dhacay Yuhuudda intii lagu jiray xukunkii Hitler. Waxaa jira qol u keenaya macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mucjisada iyo Yuhuudda.
Dhamaadka xasuusta holoscausto
10 - U fiirso calaamadaha taraafikada (Ampelmann)
Sida aan ku sheegay bilawgii boostadan, wax walba oo Berlin ah waa taariikh! Xitaa iftiinka ayaa yaraa.
Ampelmann, ama Jarmal, Ampelmännchen, - waa astaamaha ugu caansan ee aad ku arki doontid Berlin. Isagu waa doll ka duwan nalalka taraafikada.
Maxay Ampelmann muhiim u tahay?
Waxay calaamad u tahay Bariga Berlin, calaamadkani waxay ku siin kartaa fikrad ah meesha aad ku sugan tahay magaalada. Qeybta galbeed ayaa nalalka gaadiidka lagu beddelay heerarka caadiga ah.
Intaas waxaa sii dheer waxaa sameeyay dhakhtar cilmi-nafsi, xirfadle, naqshadeeyaha oo dhan kuwaas oo wada jira hal shakhsi. Xaaskiisa ayaa raacday horumarinta calaamadda waxayna siisay taageero aad u badan intii uu abuuray waxa maanta ay noqon laheyd calaamada ugu weyn ee qoyska.
Karl Peglau wuxuu u abuuray Ampelmann inuu noqdo "qurux iyo waxqabad". Labada boombalo (joogsiga iyo horumarka dadka lugaynaya) ayaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo muuqaalka muuqaalka ee dadka leh aragti hoose. Koofiyaddu, ka sokow calaamadeynta qaabka waqtiga, waxay kaloo u adeegtaa hagaajinta aragtida dhaqdhaqaaqa. Sida laga soo xigtay Karl Peglau: "baaxadda aagga, ballaadhinta nalalku, ayaa si fiican u muuqda".
Intaas waxaa sii dheer, inbadan oo 'qurux badan' caruusaddu waxay ahayd, rafcaanka wanaagsan ee nafsiyeed ee ay lahaan lahayd dadku inay eegaan nalka taraafikada.
Meelo kale oo caalami ah oo ka mid ah calaamadaha taraafikada ee caalamiga ah ayaa ahaa kuwo si taxadar leh u kobciyay dhinaca farsamada iyo nafsiyadeed sida Bariga Ampelmännchen. Nolosha abuuruhu wuxuu ku xiran yahay Berlin.
Halkan waxaan ku dhameyneynaa talooyinka safarka ee Berlin. Oo waxaad leedahay hal calaamado oo dheeraad ah? Meel kale oo ay tahay in lagu qoro liiskan?
Halkan ku dhaaf faallooyinka. Haddii aad jeceshahay, ha iloobin inaad ku raaxaysato oo aad wadaagto.
Ilaa xiga xiga!
Sidee Alemanha Berlim Sidee safarka ugu horeeya